Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Local time: 23:56
WASHINGTON— Sangano rinomirira kodzero dzevatambi venhabvu muZimbabwe, reFootballers Union of Zimbabwe, FUZ, rinoti riri kuda kuti Zifa iwedzere mazuva ekuti vatambi vakawanikwa vaine mhosva mu Asiagate vakwanise kubhadhara mafaindi avo.
Vamwe vatambi vaive vadzingwa munhabvu kwemakore anobva pamaviri kusvika pamashanu, vakapihwa kusvika kupera kwemwedzi uno kubvisa mari dzavakatarirwa neZifa kuitira kuti varegererwe.
Asi munyori mukuru weFUZ, VaPaul Gundani, vanoti nguva yakapihwa vatambi ava kuti vatsvage mari iyi ishoma zvikuru vachiti ivo panoda kuwedzerwa mazuva kusvika gore rinouya.
VaGundani vanoti vatambi venhabvu vanotambira mari shoma shoma zvekuti vanoda kupihwa kusvika muna chikumi gore rinouya kutsvaga mari dziri kudiwa neZifa idzi.
Vanotiwo vachasangana nemutungamiri weZifa, VaCuthbert Dube, pamwe nemukuru wesangano ravo, VaJonathan Mashingaidze, kuitira kuti vazeye nyaya iyi.
VaGundani vanoti vari kufara nekuti Zifa iri kutwasanudza ruoko rwayo mukuita hurukuro neFUZ pamusoro penyaya yanetsa iyi.
Zifa yakadzinga munhabvu vatambi gumi nevatanhatu zvachose vamwewo ndivo vakambomiswa kwemakore anokwana mashanu vamwe maviri vamwewo vachinzi vabvise mari iri pakati pezviuru zvitatu kusvika pazviuru zvitanhanu zvemadhora.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti mari iyi yakawanda zvikuru nekuti vatambi vebhora havasi kuwana mari inovakwanira.